5-ta Sababood ee ugu Sareeya ee Aanan u Isticmaalin Liisaska Qoraal kasta. | Martech Zone
Arbacada, Oktoobar 11, 2006 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Douglas Karr
Waan ka soo kabanayaa waxaan aaminsanahay inay tahay madax-xanuunkeyga madax-xanuun ee ugu horreeya maanta. Marka waxaan rajaynayaa inaanan ku xumaanayn qoraalkan… ma aha weerar, ee si fudud ayaan u xiiseynayaa.
Haddii aadan horay u hubin balooggiisa, waxaa ku jira macluumaad badan ProBlogger. Waxa aanan garan karin waayadan dambe waa sababta ay u tahay in qoraal kasta oo qoraal ah uu noqdo nooc liis ah?
Ma jiraan faa'iidooyin ku jira liistada ku jirta maaddadaada? Waxaan horay u dhigay liisas kujira nuxurkeyga, laakiin waa markii aan u maleeyay inay tilmaamaha bixiyeen ama ay ahaayeen dhibco rasaas ah oo aan doonayay inaan la xiriiro. Waan ogahay inay dadku raadiyaan 'Top 10' iyo 'Top 100' iyo tirooyinka kale ee guud ee liisaska, laakiin kuma arko 'Top' qaar ka mid ah liisaska ProBlogger.
Hase yeeshe, ku dhowaad qoraal kasta wuxuu umuuqdaa inuu leeyahay liis lambar leh oo nooc ah. Sidee ku dhacday
Waa kuwan Top 5 Sababaha aanan ugu isticmaalin liisaska qoraal kasta:
Uma akhriyo sida wada hadalka oo kale.
Liisaska mararka qaarkood waa kuwa shakhsiyan ah… hal qof ayaa yeelan kara hal dhibic ama boqol dhibic mawduuc kasta oo la bixiyo. Maxay tirintu muhiim u tahay?
Adeegsiga liistada lambarrada ah waxay u muuqdaan kuwo aan macquul ahayn… haddii balooggaagu ku saabsan yahay liisaska, dabcan.
Liisaska liistu badanaa waa bayaanno kooban, oo ha uga tagin qol badan sharaxaad ama dood.
Mararka qaarkood, waxyaabihii ugu dambeeyay waxay umuuqdaan nooc feker up kaliya ah si aad isugu daydo inaad uhesho tirinta aad ubaahantahay. Waxaan u baahday 5.
Oktoobar 11, 2006 at 9:10 PM
Liiska fiican. Halkan fikradaha qaarkood:
1. Uma adeegsanyo liisaska qoraal kasta - 10-kii iigu dambeeyay kaliya 2 ayaa runtii ahaa liisaska liistada (mid kale ayaa soo xigtay liistada qof kale qoray)
2. markaan idhi - Waan jeclahay qaabka liiska boostada. Waxaan u arkaa inay ku fududahay qoritaankooda iyo akhriskoodaba. Qoraalladayda kuwa liiska kuwa badanaa waa kuwa ugu caansan uguna faallo badan.
3. Waxaan ahay qof liiska ku jira nolosha dhabta ah - waxaan ka dhigayaa maalin dhan inay iga caawiyaan sidii aan isu abaabuli lahaa - marka waxaan qiyaasayaa inay aniga ii tahay qaab qoraal ah oo dabiici ah.
4. ujeedadaada ku saabsan waxyaabaha liistada inay yihiin hadalo kooban waa run - hase yeeshee liisaska liistada ee aan qoro guud ahaan waxay leeyihiin cinwaan ka dibna baaragaraaf iyaga ka dambeeya. Macno ahaan waxay aad ugu egyihiin qormooyinka aan ku qoro bayaan hordhac ah bilowga sadar kasta oo aan sharraxaad ka bixiyo ka dib. Farqiga dhabta ah ee kaliya ayaa ah in dhibcaha la qaybiyo ama la tiriyo qodobka ugu weyna waa lagu dhiiradaa si looga dhigo mid dheef shiid badan.
5. mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu waaweyn ee liistada ayaa ah inay yihiin kuwo la iska indha tiri karo. Daraasadaha lagu sameeyo akhriska khadka tooska ah waxay muujinayaan in dadka badankood ay ka falceliyaan oo aysan aqrin buugaag fara badan oo qoraal ah oo ay ku baaraan waxyaabaha ugu waaweyn ka hor inta aysan dib ugu laaban akhriska maqaal. Waxaan ogaaday in qaabka liistada ay tan ka caawinayso.
6. Aniguba runti kuma lihi inaan soo koobo liistada si aan ugu helo lambar xaqiiqa ah taasna waxay keentay inaan qoro liisas badan oo ah 9, 12 iyo lambarro kale oo la yaab leh. Labadaydii meelood ee iigu dambaysay si fiican ayaa loo soo koobay liisaska '10' laakiin way ka sii jilicsan tahay wax kasta - Waxaan qoraa qoraalkayga ka dibna dib ugu noqdaa si aan u tiro koobo dhibcaha dhammaadka oo aan ula qabsado wax alla wixii aan la imaado.
Dabcan - Waan ku dul fadhiisanayaa faallooyinkaaga. Waan ogahay in liisaska laga badin karo oo aan ka warqabo - natiijadaas darteed waxaan isku dayaa inaan xoogaa isku daro. Waad ku mahadsan tahay fikirkaaga - looma qaadanin wax weerar ah gabi ahaanba laakiin dhaliil wax dhisaysa - mahadsanid.
Oktoobar 11, 2006 at 9:25 PM
Tani waa jawaab celin aad u fiican oo iga caawisa inaan fahmo xoogaa. Haddaanan dhihi kahor xoog badan, waxaan ahay taageere weyn oo balooggaaga ah. Mid ka mid ah waxyaabaha aan ku jeclahay bartaada ayaa ah inay had iyo jeer u muuqato inay tahay wax asal ah. Markii aan iskaan-mariyey quudintayda ku celcelinta qoraalada (maanta waa isku-dhafka Google ee Qoraalka iyo Qoraalka), kaagu badiyaa wuxuu ku jiraa mowduuc cusub.
Aad baad ugu mahadsantahay waqtiga aad qaadatay si aad uga jawaabto soo galitaankeyga! Waa wax lagu farxo oo uu booqday "ProBlogger" laftiisa.
Iyo - Runtii waan jeclahay xaqiiqda inaad liis garaysay jawaabtaada. 🙂
Oktoobar 11, 2006 at 10:09 PM
mahadsanid Doug - wuxuu moodayay in faallada loo baahnaa inay noqoto liis 😉
Waxaan isku dayaa inaan waxyaalaha asalka u ahaado PB - in kasta oo ay jiraan maalmo ay tahay in warka laga dhigo waxaan filayaa.
waad ku mahadsan tahay jawaab celinta - runtii waan qiimeeyaa.